Wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo magacaabay xoghayaha joogtada ee wasaaradiis. – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo magacaabay xoghayaha joogtada ee wasaaradiis.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta,maalgashiga iyo hormarinta dhaqaalaha ee dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed ayaa Magacaabay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta sidoo kale wuxuu xilka qaadis ku sameeyay masuulkii horay u ahaa agaasimada wasaarada qorshaynta Soomaaliya.
Wasiirka Jamaal ayaa sameeyay Magacaabistii ugu horreysay tan iyo Markii 21-kii bishii maarso ee sanadkiii 2017-kii loo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaarada qorshaynta,maalgashiga iyo hormarinta dahqaalaha dowlada Soomaaliya.
Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Qorsheynta ayaa loo magacaabay C/qaadir Axmed Warsame, waxaana xilkaas horay u hayay oo laga qaaday Cabdi Diirshe.
Waxaa uu sidoo kale Agaasime u magacaabay Asad Yuusuf Afrax oo ahaa La Taliyaha wasiirka qorshaynta, waxaana booska loo magacaabay horay u hayay C/qaadir Axmed Warsame oo Xoghayaha Joogtada Wasaaradda hada laga dhigay.
← DHAGEYSO Saraakiisha amaanka gobolka Hiiraan oo digniin u diray dadka isbaarooyinka dhigta.
DHAGEYSO Gudiga adeega Garsoorka Soomaaliya oo la soo dhisayo. →